Eluigwe Gothica na First Crimson Peak Trailer - iHorror
Home Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Eluigwe Gothica na Mbụ Crimson Peak Trailer
Eluigwe Gothica na Mbụ Crimson Peak Trailer
edere ya Gareth Cavanagh February 15, 2015
The ụgbọala na-adọkpụ maka oge Guillermo Del Toro egwu Crimson Peak e leaked online na nso nso. N'ịbụ onye na-akwado Guillermo Del Toro ịsị na enwere m obi ụtọ ịhụ ihe ọ na-eme n'echiche a na-adọrọ mmasị bụ nkwupụta okwu. Ọnọdụ egwu dị na Hollywood enwetala nke ọma n'oge a, ọ dị ka nnukwu egwu nkiri a na-ewepụta n'oge na-adịbeghị anya bụ otu ihe ahụ na-agwụ ike, enweghị ụkọ, ọnya nzuzu. Hapụ mgbe a tọhapụsịrị ihe nkiri banyere ịchụ nta ezinụlọ, anaghị m ekwu na mmụọ ma ọ bụ mmụọ ọjọọ na-atụ egwu ezinụlọ enweghị ike ịdị mma ọtụtụ fim emeela nke ọma na atụmatụ a. Agbanyeghị, ọ dịka ọ dị ka ihe nkiri ndị ejirila atụmatụ a mee ihe n'oge ga-abụrịrị ndị enweghị ọgụgụ isi ma ọ bụ n'echiche.
N'agbanyeghị ụdị ihe nkiri ndị a niile bụ otu, ndị na - ege ntị yiri ka ha na - ekwu okwu, The Conjuring na Annabelle nwere nnukwu ihe ịga nke ọma n'agbanyeghị na ha jiri ụjọ na-anwale ma nwaa anwa enweghị ike ịkpọ ya egwu. N'ikwu ya, ọ bụ ihe na-enye ume ọhụrụ ịhụ onye dị ka Guillermo Del Toro inweta nnukwu mmefu ego na ikike iji echiche ya na-agba ọsọ. Del Toro abụghị naanị onye na-akọ akụkọ ọgụgụ isi kamakwa ọ bụ nna ukwu iji mee ka ihe okike dị egwu na egwu dị egwu site na omimi nke echiche ya. Ihe ngosi efu a na - pịa na ihuenyo mgbe niile, nwa okorobịa ahụ bụ ọgụgụ isi. Kedu nke kpatara na ọ bụ ihe na-atọ ụtọ na Crimson Peak gụnyere ihe niile dị iche iche yana ọhụụ ya nke naanị otu n'ime ụwa niile n'ime echiche okike ya. Crimson Peak ọ bụghị nanị na poltergeist na mmụọ ụmụ agbọghọ na-akụ ihe n'ime ụlọ ndị dịpụrụ adịpụ, ọ gbagọrọ agbagọ skeletal undead entities clawing si n'ala a nnukwu agadi mansion na enweghi ngwụcha nzuzo. Ihe onyonyo a na trailer a na-eme m obi anụrị maka mmegharị Del Toro na-abịanụ nke akwụkwọ HP Lovecraft: Na Ugwu Madness. Na-ele anya Crimson Peak? Nke a ụgbọala na-adọkpụ na-eme ka ị obi ike maka Del Toro tackling Lovecraft? Mee ka m mara na ngalaba nke dị n'okpuru.
N'Ugwu AraỌkụ GormanCharlie Hunnamelu crimsonUgbo ala na-adọkpụ CrimsonCrimson elu ụgbọala na-adọkpụ leaked onlineDoug Jonesghost akụkọegwu gothicguillermo del toroGuillermo Del Toro fimGuillermo Del Toror egwu fimHP LovecraftJessica ChastainJim BeaverOlile anya LeslieMia Wasikowskaegwu gothic nke oge aoge ihe nkiri egwuTom Hiddlestonlelee ihe nkiri Crimson Peak
Otu Abalị na Haunted Karsten Hotel
James Franco gaa Star na Stephen King Series '11 / 22/63 ′